တက္ကဆက်ပြည်နယ်၊ ဟူစတန်ရှိရုပ်မြင်သံကြားဌာန - "သင့်ကိုယ်သင်ကြေငြာသောညစ်ညမ်းဆေးစွဲသူသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုရန်ပိုမိုခက်ခဲစေရန်မျှော်လင့်သည်" ဟုဝေဖန်ခြင်း - Your Brain On Porn
တက္ကဆက်ပြည်နယ်၊ ဟူစတန်ရုပ်မြင်သံကြားဌာန၏“ ကိုယ်တိုင်တင်ဆက်ထားသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစွဲသူသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုရန်ခက်ခဲစေရန်မျှော်လင့်နေသည်” ဟုဝေဖန်ခြင်း
တီဗီ segment တစ်ခုသို့ Link ကို (ဧပြီလ 06, 2017) ။
၃ မိနစ်ကြာသည့်အပိုင်း၌ Gabe Deem၊ Dr. Donald Hilton နှင့် AASECT အသိအမှတ်ပြုလိင်ကုထုံး Emily Deayla, MA တို့ပါဝင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ပထမ ဦး ဆုံးစိုးရိမ်မှုမှာ segment ၏ခေါင်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်သည်။
၁) Gabe ရဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့စွဲလမ်းမှုဟာသူကိုယ်တိုင်ကြေငြာတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ ဒါဟာဒီတီဗွီအပိုင်းမှာအသေးစိတ်ကိုချန်လှပ်ထားတယ်၊ သူပြောတဲ့အတိုင်း (ဥပမာ၊ Gabe မှာပါ ၀ င်တယ်) ဒီတင်ပြချက် or ဤတီဗီအင်တာဗျူး)။ ဂါမသာအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေ9လအတွင်းယူကြောင်းအတွေ့အကြုံရှိနာတာရှည် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု, သူလည်းသိသာဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေတွေ့ကြုံ, များစွာသောသိမြင်မှုမမျှော်လင့်ဘဲနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြိုးကြေးဇူးမြားဖွငျ့ (နောက်ဆုံးတွင်) နောက်သို့လိုက်ကြ၏။
၂) ခေါင်းစီးပိုင်းတွင် Gabe ၏ပြင်းထန်သောညစ်ညမ်းသောသွေးဆောင်မှု ED နှင့်အဓိကပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကဖယ်ရှားလိုက်ခြင်းကသူ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုမည်သို့ကုစားနိုင်သည့်အလားစွပ်စွဲချက်မှတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်ကိုအလေးပေးဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူငယ်များသည်သူကဲ့သို့သောအဖြစ်အပျက်များကိုပြန်ပြောပြသည့်ဖိုရမ်များကို Gabe ကအချိန်များစွာဖြုန်းတီးခဲ့သည်မှာသေချာသည်။ Gabe သည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုပုံစံကိုထောက်ခံသည့်လေ့လာမှုများနှင့်ညစ်ညမ်းသောလိင်ဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ သို့သျောလညျးတီဗီဘူတာရုံသည် Gabe ၏အတွေ့အကြုံသည်ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲညစ်ညမ်းမှုကိုတားမြစ်ရန်ရည်ရွယ်ကြောင်းခေါင်းစဉ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။
ထိုအခါကျွန်ုပ်တို့သည်လိင်ကိစ္စကုထုံး၏လိုအပ်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ထင်မြင်ချက်သည်“ တကယ့်စွဲလမ်းမှု” ဖြစ်သည် (AASECT ကုထုံးသည်စွဲလမ်းမှုယန္တရားများကိုသင်ကြားခြင်းမခံရပါ။
လူတွေမသေရင်သေနိုင်တယ် နို့ မူးယစ်ဆေးသို့မဟုတ်အရက်ကိုချွတ် so, သင်ကလိင်သို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းသောပြproblemနာကိုရပ်တန့်လိုက်သည့်အခါဇီဝကမ္မဗေဒအရတူညီသောအရာမဟုတ်ပါ။ ဒါဟာမတူညီတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်နှစ်ခုပါ။ အဲဒါကြောင့် (သင်) ကအဲဒါကိုစွဲလမ်းမှုလို့မသတ်မှတ်နိုင်ဘူး၊"Deayla ကဆိုသည်။
ဤသည်ဇီဝကမ္မမှီခို (နှစ်ခုအတူတူပင်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်) အဖြစ်ပြန်လည်တံဆိပ်ကပ်စွဲလမ်း၏ပုံမှန်လှည့်ဖျားနည်းဗျူဟာဖြစ်ပြီး, အကြောင်း, "ဟုအဆိုပါအခြေအမြစ်ပြောဆိုချက်ကိုသွန်းလောင်းပေးဆုတ်ခွာသင်သည်မသတ်ဘဲနိုင်လျှင်, တကယ့်တစ်ဦးစွဲမယ့်။ ကြှနျုပျတို့သညျဤကနေလည်းပြောဆိုချက်ကိုဖြေရှင်းခြင်းမပြုမီ "သုတေသန၏လက်ရှိပြည်နယ်အပြည့်အဝ porn စွဲမော်ဒယ်ထောက်ခံပါတယ်သင်သိရ:
ဤစာမျက်နှာကိုစာရင်း 32 မှ neuroscience-based လေ့လာမှုများ (MRI, fMRI, EEG, neurospychological, ဟော်မုန်း) ခိုင်မာတဲ့ပေး ဇီဝကမ္မ အဆိုပါစွဲမော်ဒယ်ထောက်ခံမှု။
ဤစာမျက်နှာကိုစာရင်း 11 စာပေပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များ အဆိုပါ porn စွဲမော်ဒယ်မှထောက်ခံမှုချေးအားလုံးပေးသောလောကီသားတို့သည်အထဲတွင်ထိပ်ဆုံးအာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်အချို့ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဤ 14 လေ့လာမှုများ porn အသုံးပြုသူများသည်အတွက်တင်းမာမှုသို့မဟုတ်လေ့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဤ 17 လေ့လာမှုများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ porn အသုံးပြုမှု / လိင်စွဲလင့်ထားသည်။ သင်တန်းသားများကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုဖယ်ရှားပစ်ခြင်းနှင့်နာတာရှည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အနာကိုငြိမ်းစေအဖြစ်ဤစာရင်းထဲတွင်ပထမဦးဆုံး3လေ့လာမှုများ, causation ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။
ဒီမှာပါ ဒီထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုပေးရန် porn အသုံးပြုမှုကိုချိတ်ဆက် 40 လေ့လာမှုများကျော်.
ဒီတော့ sexologists တခါတရံလုပ်ပေးအဖြစ်အဘယ်ကြောင့်, တောင်းဆိုဖို့ကသိပ္ပံနည်းကျမရိုးမသားဖြစ်ပါသည်, ထိုစွဲသာအသေသတ်ခြင်းကိုဦးဆောင်ဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာတွေဖြစ်ပေါ်စေအံ့သောငှါတ္ထုများနှင့်အတူတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်?
1) အရက်၊ benzodiazepines (သို့) opioids များမှထုတ်ယူခြင်းသည်သေခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သော်လည်း၎င်းသည်ရှားပါးသောဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အမှန်တရားမှာမူးယစ်ဆေးစွဲသူများ (နောက်ဆုံးတွင်) သည်ဆေးကုသမှုမပါဘဲဆေးလိပ်ဖြတ်ကြသည်။
2) ကျွန်ုပ်တို့သည် Emily Deayla ၏ဆင်ခြင်တုံတရားအတိုင်းလိုက်နာပါက၊ ကင်း၊ crystal meth၊ amphetamines နှင့်စီးကရက် (နီကိုတင်း) တို့သည်စွဲလမ်းမှုမရှိပါ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ဤဆေးများမှထုတ်ယူခြင်းသည်သင့်ကိုမသေစေနိုင်ပါ။ The“ဆုတ်ခွာ = စွဲလမ်းအချို့သောကျွမ်းကျင်သူများကနီကိုတင်းကိုစွဲလမ်းစေသောပစ္စည်းအဖြစ်မှတ်ယူသည်ဆိုသည့်တိုင်အငြင်းပွားမှုသည်ပြိုကွဲသွားသည်။
3) အမ်မလီ Deayla 'စွဲလမ်းမှု' ကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှီခိုမှုနှင့်ရှုပ်ထွေး။ ဒါဟာစွဲလယ်ပြင်၌ကောင်းစွာထူထောင်သည်ပြင်းထန်သောဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေမရှိခြင်းသို့မဟုတ်မရှိခြင်းတစ်ခုစွဲ၏တည်ရှိမှုကိုဆုံးဖြတ်သည်သော။ စွဲလမ်းမှုတည်ရှိရန်ပြင်းထန်သော“ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများ” ရှိရမည်ဟုပြောရာတွင်အမ်မလီဒီယာလာသည်ရှုပ်ထွေးနေသည် စှဲမွဲမှု နှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှီခို (သို့မဟုတ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိသတိမရှိသောတီဗီထုတ်လုပ်သူကိုလှညျ့စား) ။
ဥပမာအားဖြင့်, တစ်ဦးချင်းစီ၏သန်းပေါင်းများစွာသောထိုကဲ့သို့သောနာတာရှည်နာကျင်မှုများအတွက် opioids, ဒါမှမဟုတ် autoimmune အခြေအနေများအဘို့အ prednisone အဖြစ်ဆေးဝါးများ၏နာတာရှည်မြင့်မားယူပါ။ သူတို့ရဲ့ဦးနှောက်နှင့်တစ်ရှူးသူတို့အပေါ်မှာမှီခိုဖြစ်လာကြပါပြီ, နှင့်အသုံးပြုခြင်း၏ချက်ချင်းချုပ်ရာပြင်းထန်ထုတ်ယူရောဂါလက္ခဏာတွေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်သူတို့သေချာပေါက်စွဲမရှိကြပေ။ တကယ်တော့အချို့အများကြီးမှာဤအရာအလုံးစုံဆေးဝါးများတာခံရဖို့မကြိုက်တတ်တဲ့လိမ့်မယ်။
စှဲမွဲမှုမှမတူဘဲ မှီခို, ကျွန်ုပ်တို့သိသောအရာကို ဦး တည်စေသော ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲများစွာတွင်ပါဝင်သည်။ ခြားနားချက်မရှင်းလင်းဘူးဆိုရင်, ငါကဒီအကြံပြုပါသည် NIDA အားဖြင့်ရိုးရှင်းတဲ့ရှင်းပြချက်။ စကားမစပ်, porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ဖွံ့ဖြိုးသောလူတို့၏ လိင်နှိုးဆွဖြစ်လာဖို့ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုစိုက်ထူအောင်မြင်ရန် porn အပေါ်သို့မှီခို, တကယ်တော့ဖြစ်ကြသည်။
4) အမ်မလီ Deayla လည်းအများအပြား, ပြင်းထန်ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေစွဲလမ်းအဖြစ်ခွဲခြားခံရဖို့ပစ္စည်းဥစ္စာသို့မဟုတ်အပြုအမူများအတွက်လိုအပ်ချက်မဟုတ်နေချိန်မှာကြောင့်သတိမထားမိဖြစ်နိုင်သည် အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့၏၏ပြင်းထန်မှုများကအံ့အားသင့်နေကြပါတယ် ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေ, အရာအားဖြင့်ကြုံတွေ့သူတို့နှင့်အတူထပ် ကိုကင်းစွဲနှင့်အရက်သမား။
ဒါ့အပြင်သုတေသီတွေကပဲဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေအကြောင်းကို porn အသုံးပြုသူများကိုမေးမြန်းဖို့စတင်ပါပြီ။ ယခုပင်လျှင်ရှိပါတယ်2လေ့လာမှုများ porn အသုံးပြုသူများအပေါ် ကြောင်းနောက်ဆုံးတော့ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေအကြောင်းမေး - နှစ်ခုစလုံးအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများကဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေတွေ့ကြုံခံစားသည်ဟုသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
၅။ ၂၀၁၃ DSM-5 သည်အသစ်တီထွင်ထားသောအပြုအမူစွဲလမ်းမှုတွင်လောင်းကစားခြင်းကိုထပ်မံထည့်သွင်းလိုက်ခြင်းသည်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုသာစွဲလမ်းစေနိုင်ကြောင်းနှင့်စွဲလမ်းမှုသည်မူးယစ်ဆေးဝါးကိုသာဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ဟုသူမအခြေအမြစ်မရှိသောပြောဆိုချက်ကိုထုတ်ဖော်လိုက်ခြင်းကို Emily Deayla ကသတိမထားမိပုံရသည်။ ကြည့်ပါ ဒီ DSM-5 ထုတ်ဝေ.
လို့သူကပြောပါတယ်သည့်အခါ 6) အမ်မလီ Deayla လည်းမှားတောင်းဆိုမှုများကိုဖန်ဆင်း:
“ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းသောပြproblemနာကိုသင်ရပ်တန့်လိုက်သည့်အခါဇီဝကမ္မဗေဒအရတူညီသောအရာမဟုတ်ပါ။ ဒါဟာမတူညီတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်နှစ်ခုပါ။
တစ်ခုချင်းစီကိုစွဲလမ်းမူးယစ်ဆေး (ဥပမာ, နာတာရှည် Vicodin အသုံးပြုမှုကို၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် opioids ၏အောက်ခြေအဆင့်ကိုထုတ်လုပ်ဦးနှောက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြလို့ဆင်း-စည်းမျဉ်း opioid receptors ၏) ဇီဝပြောင်းလဲမှုအတန်ငယ်ကွဲပြားခြားနားသောကြယ်စေပါတယ်။ ဒါဟာတစ်ဦးချင်းစီစွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီအမူအကျင့်စွဲ (လောင်းကစားဝိုင်း, porn, အစားအစာ, အင်တာနက်) အချို့သောထူးခြားတဲ့အာရုံကြောနှင့်ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲပါဝငျဆိုလိုသည်။
(အမူအကျင့်များနှင့်ဓာတုနှစ်ဦးစလုံး) ကိုအခြားတစ်ဖက်တွင်စှဲ လည်း တစ်ဦးမှဦးဆောင်လမ်းပြ အာရုံကြောပြောင်းလဲမှုများ shared အစုံ - အမ်မလီ Deayla အားဖြင့်လျစ်လျူရှု။ ညစ်ညမ်းဆေးစွဲသူများတွင်ဖြစ်ပေါ်နေသောအဓိကပြောင်းလဲမှုနှစ်ခုမှာ -
(CRF တဝိုက်ဗဟိုပြု) အလုပ်မဖြစ်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များကို။
အဲဒီနှစျခုစွဲ-related ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများနှင့်အတူကြုံတွေ့ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေအများအပြားမှမြင့်တက်ပေးဟန် မည်သည့် ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်စွဲ: ပင်ပန်း, Down-စည်းမျဉ်း dopamine အချက်ပြ၏စသည်တို့ကိုလှုံ့ဆျောမှု, စိုးရိမ်ပူပန်, စိတ်ကျရောဂါ, အိပ်မပျော်, ယားယံခြင်း, မတရားသော, အညစ်, စိတျအပွောငျးအလဲ, မရှိခြင်း porn အသုံးပြုသူများအပေါ်ဤအကြောင်းလေ့လာမှုများအစီရင်ခံသော desensitization နှင့်လေ့နှင့်ဆက်စပ်သည်: 1, 2, 3, 4, 5, 6။ ထိုလေ့လာမှုများ porn စွဲအတွက်အလုပ်မဖြစ်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များကိုတွေ့ပြီ: 1, 2, 3.